Anyị na-echere gị na Automechanika Shanghai-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Anyị na-echere gị na Automechanika Shanghai
Automechanika Shanghai (AMS) bu ihe ngosi ama ama ama ama nke uwa nile: otu n'ime ihe ngosi iri na abuo n'ime uwa nke automechanika na Germany, na 15th na 2019. AMS kwesiri ka o buru ibu ngosi di oke ala n'èzí automechanika global brand exhibition in Germany.
Anyị SUNSOUL sonyekwara na ihe ngosi a, nabata ndị ahịa ọhụụ na ndị agadi ka ha gaa. Uru nke ngwaahịa sunsoul: mma emere ya, ọrụ nchebara echiche, akara onwe ha.
SUNSOUL gbadoro ụkwụ na ndị ọrụ aka anyị na ịdị n'otu, anyị mepụtara ọtụtụ ngwaahịa nrụzi taya, dịka Valve ngwaike OEM ọkọlọtọ na chọrọ. N'ihi na anyị nwere ezi uche na-eri na-adabara ọrụ, anyị na-ezitekwara ahaziri maka Amazon na retail ahịa. Dabere na ịchịkwa dị ka usoro TS16949, ngwaahịa anyị mepụtara nke valvụ taya na igwe igwe na-ezutekwa TRA, ETRTO ọkọlọtọ mba.
SUNSOUL na-ewepụta uto bara uru iji hụ na ị ga-enwe ihe ịga nke ọma site na itinye pọtụfoliyo azụmahịa anyị ziri ezi. Anyị na-agbasi mbọ ike maka izu oke ma na-agbaso ịdị mma. Ndị ọrụ kachasị mma bụ ntọala maka ihe ịga nke ọma nke ụlọ ọrụ anyị. Ejirimara ụlọ ọrụ anyị site na nkwụsi ike, nghọta na nkwanye ùgwù. Anyị na-agba ndị ọrụ anyị ume ka ha nwe ụlọ ma too ya na ụlọ ọrụ ahụ.
Anyị ji obi anyị niile anabata gị ka ị mụta maka ngwa anyị, SUNSOUL's Booth No.: 7.2A35
Ọzọ: Ekele dịrị gị na ezinụlọ gị